What is the meaning of "ကျွန်တော်ပထမနေ့မှာ အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်။"? - Question about English (US) | HiNative
ကျွန်တော့်ရဲ့အတန်းဖော်တွေက ငါ့ကို နွေးထွေးစွာကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်။
I was very excited on the first day
ငါ့အတန်းရဲ့ အကြောင်း‌ေြပာတာ ဒီမှာရပ်ပါရစေ။
@mrjaybilin so sometimes I'm late for class
@mrjaybilin Let me stop here about my class.
What does ကျွန်တော်ပထမန...